Dzimwe nzira dzeYfy ~ Dzakanakisa Alternatives kune YTS muna 2022 | la-manette.com
16 novembre 2021 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Muchinyorwa chino, isu paiLounge tichagovera zvakanakisa dzimwe nzira dzeYfy muna 2021. Tiri kuzokuudza zvikonzero nei YTS kana Yify saiti yakavharwa uye ndedzipi dzakanakisa dzimwe nzira.
Nzvimbo dzeTorrent dzagara dzichiongororwa kubva kune vezvemitemo nekuda kwekuzivikanwa kwavo izvo zvinobvumira vashandisi kudhawunirodha zvemukati zvine kodzero.
Ichi ndicho chikonzero nei dzimwe dzenzvimbo dzakanakisa dzerukova seThe Pirate Bay, Extratorrent uye kickass Mazizi akavharwa munyika dzakawanda.
Imwe saiti yerukova yakatarisana nekukanganisa kwemitemo ndeye Yify mafirimu kana YTS. Yify mafirimu ndeimwe yeakanakisa torrent saiti nekuti inoonekwa seimwe yeanonyanya kufarirwa masosi munharaunda yekugovana-kune-vezera.
Related : 100% inoshanda ExtraTorrents proxy kusunungura Extratorrents].
Kana uchigara munyika iyo Yify kana YTS isingashande, heino rondedzero yeYTS sarudzo dzaunogona kugara uchishandisa kudhawunirodha mafaera. Aya maYify sarudzo zvakare ane hombe sarudzo yemafaira torrent kudhawunirodha, uye mazhinji emamwe masaiti ataurwa pano anoshanda munyika zhinji.
Yakanakisa Yify Alternatives 2021
1. The Pirate Bay -Yakanakisa imwe nzira kune Yify mafirimu
Iyo Pirate Bay ndeimwe yeanonyanya kufarirwa masaiti emvura munyika. Nguva pfupi yadarika takadzidza kuti Iyo Pirate Bay yadzoka pamhepo uye ichavepo kuburikidza neyayo yekutanga domain - thepiratebay.org.
TPB inzvimbo inosarudzika yerukova pakati pevanofarira nzizi nekuda kwemhando dzakasiyana dzenzizi dzaunogona kudhawunirodha kubva pano uye yayo yakachena mushandisi interface. Uchishandisa iyi YTS sarudzo, unogona download nzizi de mafirimu, software, terevhizheni, mumhanzi uye nezvimwe zvakawanda.
Related : KickAss proxy list [100% kushanda dzimwe nzira dzeKickAss Torrents]
2. 1337x -Yakanakisa Yify Mafirimu Clone Webhusaiti
Kana iwe uchida kudhawunirodha mabhaisikopo, maapplication, uye software uchishandisa torrent uye Yify mafirimu asiri kushanda, 1337x ndiyo yako inotevera yakanakisa sarudzo.
Iyo torrent saiti ine yakanakisa yekuona kukwezva nekuti zvese zvinotanga ne index peji kusvika kupeji yekutsvaga mhinduro zvakagadziridzwa. 1337x yakanangidzirwa kune vateereri vakawanda vevanodisisa mafashama nekuda kwekukamurwa kwemafashama.
Verenga zvakare: Maitiro ekushandisa foni yako se USB webcam
Iwe unogona kutarisa kuburikidza nemamuvhi, TV, Mitambo, Mimhanzi, Mapurogiramu, Anime, nezvimwe. Kunze kwezvo, kune nzvimbo inofamba mune iyi YTS torrent imwe nzira iyo inoshandisa ese ane mukurumbira uye mafambiro enzizi pasina kuda kupinda mudambudziko rekuvatsvaga nemaoko.
3. Kickass Torrents -Imwe yakakurumbira YTS imwe nzira
Kickass Torrents haidi kuunzwa sezvo iyi saiti inofarirwa zvakanyanya painternet. Ichibuda seimwe yeakanakisa torrent saiti ye2021, Kickass Torrent ine mukana wekushanda seyakanaka YTS sarudzo kune avo vasingakwanise kuwana YTS nekuda kwechero chinhu.
Kunyange iyo yekutanga Kickass Torrent saiti yakavharwa kare kare, akati wandei magirazi masaiti akaonekwa paInternet. Iyo girazi domain inowanzo ine yakafanana interface uye marongero esarudzo.
Iwe unogona kuwana iyo torrent catalog, iyo inonyanya kufarirwa nzizi uye Yepamusoro torrent chikamu kumusoro. Aya anouya aine tag gore rinokuudza nezve zvakajairwa kutsvaga pasaiti.
4. ExtraTorrent - YTS.mx Alternative kune zvese izvo torrent inoda
Extratorrent yaive imwe yeanonyanya kufarirwa masaiti erukova kusvika yavhara muna 2017 semamwe masaiti erukova. Sezvo Extratorrent yakatarisana nechisimba chevakuru uye vezvemitemo, akati wandei eExtratorrent mirror mawebhusaiti akaonekwa.
Iwe unogona zvakare kushandisa saiti proxy Extratorrent kana iyo torrent saiti isingawanikwe mudunhu rako. Extratorrent inobata nevateereri vakawanda nekupa akawanda mafaera erukova uye saka panogona kunge paine YTS sarudzo yaunogona kushandisa.
5. Rarbg - Iyo yakanakira imwe nzira kune Yify Mafirimu
Kunyangwe izere nezviziviso uye pop-ups, Rarbg yakachengetedza nzvimbo yayo seimwe yenzvimbo dzinozivikanwa zvikuru dzenzizi pasi rose. Kana Yify mafirimu asiri kukushandira nekuda kwechimwe chikonzero, unogona kugara uchienda kuRarbg kudhawunirodha nzizi. Iine hutano muunganidzwa wehova dzine nhamba yakakwana yembeu.
Rarbg inonyanya kufarirwa pakati peavo vanotarisira kudhawunirodha mabhaisikopo vachishandisa masaiti erukova sezvo iyi YTS imwe nzira inopa matrailer emamuvhi azvino mukuwedzera kune nzvimbo yakatsaurirwa yekudhawunirodha mafirimu uchishandisa nzizi.
Verenga zvakare: Unoziva sei kana mumwe munhu ari kushandisa Wi-Fi yako?
6. Lime Torrents -Nzvimbo saiti senge Yify mafirimu
Lime Torrents yakaonekwa nguva nenguva mune rondedzero yeakanakisa torrent masaiti. Iyo torrent saiti yakawana mhinduro yakanaka kubva kune vashandisi sezvo iwe uchigona kuwana chero chero torrent faira pane ino saiti.
Lime Torrent iri pakati peakanakisa nzira dzeYTS dzaunogona kushandisa kurodha mafaera erwizi kana Yify mafirimu asiri kushanda.
Webhusaiti yeLime Torrent inogadziridzwa nguva nenguva, ichiita kuti ive imwe yenzvimbo dzinofarirwa nevateveri verwizi. Iwo mafaera erwizi anogarwa pano ane yakakosha nhamba yembeu uye leecher.
Related : 8 yakanakisa torrent yekutsvaga masaiti kuti uwane chero rukova
7. Zooqle - Favorite Yify imwe nzira
Zooqle ndiyo yazvino torrent saiti kuoneka pane yedu runyorwa rweakanakisa Yify dzimwe nzira. Iri izita idzva mune chaiyo torrent niche inosimbisa chinzvimbo chayo nekuwedzera huwandu hwemafaira enzizi anowanikwa kurodha kune vashandisi.
Zooqle zvakare ine akasiyana siyana anosanganisira maapplication, mitambo yemavhidhiyo, mabhaisikopo, mimhanzi, uye software yaunogona kushandisa kuwana nzizi nyore. Zooqle ine chikamu chakatsaurirwa kune zvakanyanya kuyerera, inova inzvimbo inonakidza yandinoda kuona pane mamwe masaiti erukova zvakare.
8. EZTV - Imwe yemakore gumi-ekupedzisira kune YTS
EZTV yakagadziridzwa muna 2005 uye mushure mehupenyu hunoshamisa hwemakore gumi, yakavharwa muna 10 mushure mekunge maseva ayo atorwa ne "EZCLOUD LIMITED". Munguva yakapfuura, EZTV yakatarisana nematambudziko akati wandei uye yanga isiri kushanda kwenguva yakareba.
Neraki, iyi Yify imwe nzira yave kushanda uye inogona kushandiswa nevashandisi kurodha mafaera. Chimwe chezvakadzikira paEZTV ndechekuti yazara nemashambadziro anogona kukutsamwisa.
Related : PirateBay Proxy List [100% inoshanda TPB proxy sites | TPB mirror sites].
YTS 2021 Alternatives: Shandisa proxy torrent nzvimbo
Kana maYify mafirimu asiri kushanda munharaunda yako uye ISP yako yakavharira kupinda kune chero masaiti erukova ataurwa pamusoro, aya ma proxies uye masaiti egirazi ari pano kuti abatsire. Unogona kushandisa aya maproxy saiti sedzimwe nzira dzeYfy kana zvichidikanwa.
Verenga zvakare: Unogona kuronda mbozhanharembozha here?
Dzimwe nzira dzeYify Mafirimu: FAQs
Chii chinonzi Yify?
Yify Torrents kana YTS (Yify Torrents Solutions) inzvimbo yakakurumbira torrent saiti inopa yakakura kusarudzwa kwemafaira emvura uye magineti zvinongedzo.
Chii chakaitika kuna Yify?
Yekutanga saiti yeYfy yakamanikidzwa kuvharwa mushure mekunge muridzi apomerwa mhosva yekuparadzira zvisiri pamutemo zvemukati. Kubva ipapo, dzakawanda Yify dzimwe nzira uye magirazi masaiti akabuda aine yakafanana interface yekushandira vashandisi.
Yify ichiri kushanda here?
Yekutanga saiti yeYfy yakavharwa muna 2015, asi unogona kuwana iyo Yify girazi masaiti uye neYTS sarudzo dzatataura pamusoro.
Sei maYify mafirimu asiri kushanda?
Kana maYify mafirimu asiri kukushandira, mukana wekuti webhusaiti yakavharwa neISP yako. Muchiitiko ichi, unogona kushandisa Yify mabhaisikopo sarudzo kana mamwe masaiti erukova kurodha mafirimu kuburikidza ne torrent.
Disclaimer: Iwo torrent saiti anoratidzwa pazasi ndeyezvinangwa zveruzivo chete. Isu hatikurudzire kushandisa kwavo kudhawunirodha zvinhu zvine copyright.
Jean Michel anga ari mupepeti-mukuru pa la-manette.com kwemakore akati wandei ikozvino. Akatanga kunyora paCall of Duty muna 2018 kuti asiyane mumitambo yenguva yakazotevera kunyanya Fortnite, kuti azopedzisira adzoreredza nhanho dzake nekupwanya kudzoka kweCoD kumusoro kwekutamba nehondo yake ine mukurumbira iyo inopera ne "zone. " uye inotanga na" Hondo ". Unogona kubata Jean Michel pakero iyi: [email inodzivirirwa]
10 akanakisa maficha eUbuntu 15.10 Wily Werewolf